Waxa la sheegay in magaalada qoobo halka canjeerada ah lagu gato 50 bir – ዜና ከምንጩ
Waxana magaladaasi ka ganacsan kara canjeerada dadka u dhashay deegaanka tigraay.
Waxa wargayska addis maleda u waramay dadka ku nool magaalada qoobo iyo agagaarkaeeda in magaaladaasi ku taala woqooyiga walo oo kooxda argagixisada ah ee tplftu qabsadeen halkii canjeero ahayd lagu iibiyo 50 bir.
Dadki dhawaanta ka soo barokacay agagaarka qoobo ee u soo qaxay magaalada dhase sida ay ku warameen kooxda argagaxisada ah ee tplf intii ay qabsadeen halkaasi in ay ka boobeen raashinkoodi oo dhan oo xiligan xaadirka ah halkii canjeerada ahayd lagu iibisado 50 bir oo dadka halkaasi joogana ay gaajaysanyihiin.
Waxa ay yidhaahdeen halkii canjeerada ahayd ee 10ka bir la siin jiray hada waa 50 bir, waxaana arintaasi sababay in ay canjeerada iibiyaan kaliya ganacsato ka timid deegaanka tigraay oo qoobo soo dagtay.
Waxa u wargayska addis maleda u dadkii halkaasi daganaa ka soo ogaaday in wixii laga dhacay mooye lacagti ay gacanta ku haysteen ay ka dhamaatay, wax kasta oo halkaasi lagu iibiyana ay qiimaheedu xad dhaaf noqotay, sidaasi darteena si ay u iibsadaan quud maalmeedkoodana ay awoodi waayeen.
Wiil dhalinyaro ah oo magaciisa la yidhaahdo Mahidher Tadhese oo maalmo dhaweeyto ka yimid magaalada qoobo oo yimid magaalada dhase ayaa yidhi wax la yaabka lihi maaha in xabada canjeerada ahi ay noqotay 50 bir ee waxa ka sii yaab badan in 50 bir xata aan lagu helaynin canjeerada.
Waxa kale oo u yidhi Mahidher mudo labo bilood ah koronto kama jirto halkaasi. Dadkii u dhashay deegaanka tigraay ee halkaasi yimid ee ganacsiga ka bilaabay waxa ay kor u qaadeen qiimihi wax kasta, halkii shamac ahaa ee 10ka bir la siin jiray 60 bir, halkii litir ee saliida ahaa ee la siin jiray 120ka bir 390 bir,kibriitki la siin jiray 4ta bir 13 bir iyo roodhidi la siin jiray 2da bir in imika la siiyo 10 bir ayuu sheegay.
Waxa kale oo intaas u raaciyay in tooshka gacanta la siiyo 160 bir oo batariga yar ee tooshak halkii xabo 50 birlagu gado, sidaas darteedna dadkii halkaasi ku noola ay koronto la’an ku dhibanyihiin. Dadkai ka badbaaday dagaladi ee halkaasi ku noola waxa si u kas ah loogula dhaqma burbur dhaqaale waxa intaasi u dheer bu yidhi madaama aanay dadku wax lacag ah haysanin in ay la soo daristay gaajo iyo koronto la’ani.
Waxa kale oo u wargayska addis maleda u la kulmay nin la yidhaahdo Ayene Belaay oo xirfadle caafimaad ah waxaana u yidhi in kasta oo halkii canjeerada ahayd lagu iibin jiray in kabadan 50 bir xiligan xaadirka ahna lamaba helo. Waxa kale oo u yidhi halka kilo ee burka ah waxa la siiya 70 bir waxana ka ganacsan kara oo iibin kara bu yidhi dadka u dhashay deegaanka tigraay. Waxa kale oo dhacday buu yidhi dadkii u dhashay halkaasi ee halka kiintaal ee burka ah ku iibin jiray 2000 ee bir waxa lagu yidhi sideebaad intaasi ugu iibinaysaan oo meelihi ay ku ganacsan jireen waaba laga caydhiyay. Kuwa u dhashay deegaanka tigraayna halka kiintaal ee burka ah waxa ay hada ku iibiyaan 7 kun oo bir.
Waxa kale oo Ayene Belaay u sheegay in magaalada qoobo ay ka jireen labo makiinadood oo midhaha lagu ridqo kuwaasi oo halka kilo ee midhaha ah lagu ridqi jiray 26 bir, in bil ka hor la wada fujistay makiinadahaasi oo loo qaatay deegaanka tigraay. Burka lagu iibiyo magaalada qoobo in laga keeno asaaga oo shiidan deegaanka tigraay oo ay ganacsatada tigraay kaliya halkaasi ku iibiyaan si tafaariq ah.
Kooxda argagaxisada ah ee tplf in kasta oo ay dadka isaga dhigaan bu yidhi kuwo wax u taraya, hadana xaqiiqadu sidaasi way ka duwantahay oo wax kastaba waa qaali. Waxa kale oo u yidhi waxa aan si hubaal ah uga warami kara in laga bilaabo 4ti bishi paagume ay dhaqdhaqaaq kasta oo ganacsi ah u joogsaday oo wax soo saarna aanu halkaasi ka jirin dadki meeshaasi ku noolana ay gaajaysanyihiin.
Sida ay sheegeen dadki ka soo barokacay qoobo ee yimid magaalada dhase in meelaha ay qabsadeen kooxda tplftu dadkii ku hadhay ay gaajo u dhimanayaan labadii bilood ee u danbeeyay kasakoow in weerarki ay ku qaadeen halkaasi kooxdaasi 4tii bishi paagume ee 2013kii ay ku laayeen in ka badan 600 oo qof dad rayd ah.
Waxa ay yidhaahdeen dadkaasi rayidka ah ee halkaasi lau laayeey ay ka midka ahaayeen dad waayeel ah oo bila awood ah. Waxa kale oo dad goob joogayaal ahaa ay sheegeen in meesha lagu magacaabo senyo gabaya minooyinkii lagu qarxiyay ay ku naf waayeen dad meelo kale ka yimid oo shaqaale maalmeed ahaa iyo beero laydi magaaladaasi.
Waxa ay yidhaahdeen dadki halkaasi ka soo cararay labo bilood ayaa ka soo wareegtay itii aan ka soo barokacnay goobihi aan daganayn cid na maqasha ayaan la’anahay ugu yaraan dadkii ka badbaaday dagaalada ee halkaasi ku sugan waxa ay u dhimanayaan gaajo ee waxa haboon in laanqayrta cas ay u gurmato.
አዲስ ማለዳ Meskrem 15 2014 No 14
Total views : 6693296